သဘာဝရှုခင်းတွေနဲ့ ချစ်စရာဆင်ချောလေးတွေကို တစ်ဝကြီးကြည့်ရှုခံစားရမဲ့ Jungle – Trend.com.mm
Posted on June 9, 2019 June 7, 2019 by Shun Lei Phyo
ဗလ ကောင်းကောင်းနဲ့မင်းသားကိုလူချောရယ် သဘာဝ အလှတွေနဲ့ပြည့် နေတဲ့ တောကြီးရယ်၊ ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ ဆင်လေးတွေရယ်ကို တစ်ပြိုင်နက်တည်းခံစားရမဲ့ အိန္ဒိယ ကားကောင်းလေးတစ်ကားကို သိပြီးကြပြီလား? ဒီကားလေးက တော့ Junglee လို့ အမည်ရတဲ့ တောတွင်းကားလေးပါ။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကို ပြောရမယ်ဆိုရင်ှဗလ ကောင်းကောင်းနဲ့ လူခန့်ကြီး ဆရာဝန် တောသား လေး တစ်ယောက်သူချစ်ခဲ့ရပြီးသူ့ရဲ့ငယ်ဘ၀ အမှတ်တရ တွေပြည့် နေတဲ့ သူ့ ဖခင် ဆင်ထိန်းစခန်းကို ပြန်သွားရာမှာ တော့ …. ဘာတွေဖြစ်ကြသလဲ? …ဆင်လေးတွေနဲ့ လူပေါ်က မေတ္တာ တရား ၊ သားအဖ ကြားက လွဲမှား နေတဲ့နားလည်မှု တွေ၊ မင်းသားရဲ့ငယ်သူငယ်ချင်း ခပ်ယဉ်ယဉ် ဆင်ထိန်းမ လေး နဲ့ မင်းသားနောက်က တစ်ကောက်ကောက်လိုက်နေတဲ့ သတင်းထောက်မ လေးတို့ ဇာတ်လမ်းက ရော??
တောတောင်သဘာဝ တွေကို ကြည်ကြည်လင်လင်ခံစားချင်ပြီး သိပ်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ဆင် က လေး တွေကို ကြည့်ချင်ပါတယ်ဆိုရင် တော့ တကယ်ကို အနှစ်အရသာရှိတဲ့ကားကောင်းတစ်ကားပါပဲ။
Posted in Bollywood, Lifestyle, Movies